Al Shabaab oo Sarkaal sare ku dishay Gudaha Magaalada Muqdisho. – Calamada.com
Al Shabaab oo Sarkaal sare ku dishay Gudaha Magaalada Muqdisho.
Xoogag aad u utababaran oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa saaka sarkaal sare oo katirsan ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ku dilay bartamaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Goob joogayaal ayaa sheegay in rag hubeysan ay degmada Waaberi ku dilen Gaashaanlle dhexe Cabdi Maxamed Culusow (Cabdi Madoobe) oo kamid ahaa saraakiisha sarsare ee taliska ciidanka Melleteriga Dowladda Federaalka.
“Ciidamada Mujaahidiinta ayaa howlgal qorshaysan ku dilay Gaashaanlle katirsan Kooxda ridada ah xili uu ku sugnaa degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho” ayaa lagu yiri war kooban oo Al Shabaab kasoo baxay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in xoogagii dilka geystay ay horay usii qaateen bastoolad uu watay sarkaalka ladilay, ciidamadii ilaalada u ahaa Gaashaanlle Cabdi Madoobe ayay usuurtageli waysay in ay difaacaan sarkaalka.
Xarakada Al Shabaab ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay howlgallo qorsheysan ka fulinaysay degmooyinka ku teedsan wadada Makka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho oo ah meelaha ay ku xooggantahay dowladda.
Previous: Dhageyso Wareysiga Mujaahidkii Fuliyay Weerarkii Lala Beegsaday Kontaroolka Laga Ilaaliyo Villa Somalia.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo-24-04-1440 Hijri.